Detoronomy 18 - Ny Baiboly
Detoronomy toko 18
Ny fisoronana - Ny sikidy sy ny faminaniana.
1Ny mpisorona Levitika, ny fokon'i Levì rehetra dia tsy mba hanana anjara na lova miaraka amin'Israely, fa ny soron'ny Tompo atao amin'ny afo sy izay lova avy aminy no hiveloman'izy ireo. 2Tsy mba hanan-dova eo amin'ny rahalahiny izy, fa Iaveh no lovany, araka ny efa voalazany tamin'izy ireo. 3Izao no anjaran'ny mpisorona avy amin'ny vahoaka amin'izay misorona omby na ondry: homena ny mpisorona ny sorony sy ny valanoranony ary ny vavoniny. 4Homenao azy koa ny santatry ny varinao, sy ny divainao vaovao sy ny diloilonao ary ny santatry ny volon'ondrinao; 5satria izy no voafidin'ny Tompo Andriamanitrao, tamin'ny fokonao rehetra, hitoetra eo anatrehan'ny Tompo sy hanao ny fanompoana amin'ny anaran'ny Tompo, dia izy sy ny zanany mandrakizay.
6Raha misy Levita miala amin'ny anankiray amin'ny tanànanao, amin'izay fitoerana onenany ao amin'Israely na aiza na aiza, ka tonga araka ny fanirian'ny fony amin'ny fitoerana izay hofidin'ny Tompo, 7sy manao fanompoana amin'ny anaran'ny Tompo Andriamaniny, toraky ny rahalahiny rehetra, ny Levita, izay mitoetra eo anatrehan'ny Tompo, 8dia hanana anjara fivelomana toraky ny an'ireo koa izy, afa-tsy izay azony amin'ny fivarotana ny anjara lovany. 9Rehefa tafiditra any amin'ny tany omen'ny Tompo Andriamanitrao anao hianao, dia aza mianatra maka tahaka ny fahavetavetan'ireo firenena ireo. 10Aoka eo aminao tsy hisy olona mampandeha ny zanany lahy na zanany vavy hamaky ny afo, manao sikidy, mikaroka ny vintana, mitandrina fadifady, manao fankatoavana, mampiasa ody, 11mila hevitra amin'ny mpamoha angatra sy amin'ny mpamosavy ary manontany ny maty; 12fa halan'ny Tompo ny olona rehetra manao izany zavatra izany, ary noho izany fahavetavetana izany no handroahan'ny Tompo Andriamanitrao ireo firenena ireo ao anoloanao. 13Aoka ho marina tanteraka amin'ny Tompo Andriamanitrao hianao. 14Fa ireo firenena horoahinao no mihaino ny mpanandro sy ny mpisikidy, fa hianao kosa tsy avelan'ny Tompo Andriamanitrao hanao izany.
15Hanangana mpaminany anankiray tahaka ahy eo afovoanao, eo amin'ny rahalahinao, Iaveh Andriamanitrao; hohenoinareo izy. 16Izany no nangatahinao tamin'ny Tompo Andriamanitrao tany Horeba, tamin'ny andro nivoriana, nataonao hoe: Aoka tsy ho ny feon'ny Tompo Andriamanitro intsony no ho henoko, ary aoka tsy hahita izany afo lehibe izany intsony aho, fandrao maty. 17Dia hoy Iaveh tamiko: Tsara ny voalazan'izy ireo. 18Hananganako mpaminany anankiray tahaka anao, avy eo amin'ny rahalahiny, izy; hapetrako eo am-bavany ny teniko dia holazainy amin'izy ireo ny zavatra rehetra handidiako azy. 19Ka raha misy tsy mihaino ny teniko, izay holazainy amin'ny anarako, dia izaho no hampamoaka azy ny amin'izany. 20Fa ny mpaminany izay entim-piavonavonana kosa, ka manambara amin'ny anarako ny teny tsy nodidiako holazainy, na miteny amin'ny anaran'andriamani-kafa, dia ho faty izany mpaminany izany. 21Ary raha hianao hanao anakampo hoe: Ahoana no hahalalantsika izay teny tsy nolazain'ny Tompo? 22Rehefa miteny amin'ny anaran'ny Tompo ny mpaminany, nefa tsy tonga, ary tsy tanteraka ny zavatra nolazainy, dia izany no teny tsy nolazain'ny Tompo: fiavonavonana no nilazan'ny mpaminany izany; aza matahotra azy hianao. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0473 seconds